မင်းစိတ်ကြိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မင်းစိတ်ကြိုက်	15
Posted by Yan Nyein Thu on Jul 15, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 15 comments
ငါ့အတွက်ဆို အမြဲ busy
Facebook မှာဆို အမြဲ ready
တစ်စောင်ပီးတစ်စောင် တက်နေခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ comment
တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် accept လုပ်နေတာက boy friend သက်သက်
မင်းလိုချင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို ချုပ်ချယ်သလိုများ ဖြစ်နေသလား
ပြောသမျှစကားများ ရစ်တယ်လို့ပဲ ထင်နေပြီလား
မင်းပြောခဲ့တာက ငါ့ကိုအရမ်းချစ် ငါခံစားရတာက ပိုးစိုးပက်စက်
မင်းကိုချစ်တဲ့အချစ် တစ်ရွေးသားမှ လျော့ပါးမသွားပေ
မီးခိုးငွေ့တွေ ဆက်တိုက်လွင့်နေ ငါ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေ လွင့်ပါသွားစေ
မင်းပြောသမျှစကားအကုန် ငါ့မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇွတ်ယုံ
စိတ်ကြိုက်သာလုပ်ပါ ချစ်သူရယ် ဘ၀တစ်ခုလုံး ပုံအောပေးခဲ့ပါပြီကွယ်
စိတ်ကြိုက်သာလုပ်ပါ ချစ်သူရယ် ရင်တစ်ခုလုံး ရင်းခဲ့ပြီးပါပြီကွယ်
စိတ်ကြိုက်သာလုပ်ပါ ချစ်သူရယ် အရာအားလုံးမင်းသဘောပါပဲကွယ်…..
About Yan Nyein Thu
Yan Nyein Thu has written3post in this Website..
View all posts by Yan Nyein Thu →	Blog
သူကလေး says: မဟုတ်ပါဘူး မလုပ်ပါဘူး မင်းထင်သလိုမယုတ်မာဘူး :D
Inz@ghi says: ဟုတ်ပါတယ် လုပ်ပါတယ် မင်းထင်တဲ့အတိုင်းငါ ယုတ်မာတယ်..
ဟုတ်တာတခုငါ ထုတ်ကာပြောမယ် ..လူတကာနဲ့လည်း ရှုပ်ပါတယ်..ဟီဟိ။။။
သူကလေး says: အွန် တေရော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12138
အလင်း ဆက် says: စိတ်ကြိုက်သာ ရေးပါ ကဗျာဆရာရယ်
ခံစား အားပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ
TNA says: ဒမြတို့ချောင်းနေပါတီ။ ဟီဟိ
အလင်း ဆက် says: အဟီးးးးး
တူ့ ဆီ က… ဒမြ တိုက်ထားပြီးပြီ ။
သူကလေး says: ရတောင်ပြီးပြီမဟုတ်လား။ ဟွင်း ဟွင်း
uncle gyi says: အပြောတလုံးမိုးတလုံး
kyeemite says: ကဗျာလေးနဲ့ ရင်ဖွင့်ပြီးဝင်လာသူကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
Garfield says: ရန်ငြိမ်းသူ ???
ဒီနာမည် ကြားဖူးနေသလိုပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12138
အလင်း ဆက် says: မျင်ဖူးမှာပေါ့
လွန်းပြဲပြဲ ( ရွှီးတက်ကသို ) လေ
သူကလေး says: ဖွပီ ဖွပီ :D
candle . says: ငါ ဘယ်လောက်ဘဲ ရည်းစား များများ
အချိန်တန်ရင် နင့်ကိုဘဲ လက်ထပ်မယ်ဆိုတာ နင်မှတ်ထား
ဘာမှလာမပြောနဲ့ ..ဟီး..ဖွဘုတ်မှာတွေ့ ဖတ်ထားတာ…:P
လုံမလေးမွန်မွန် says: နာတော့ rap လိုပဲ လိုက်ဆိုကြည့်မိတယ်…မိုက်ဒလယ်ဟ….
နာလည်း rap ဆန်ဆန် တစ်ပုဒ်လောက် ရေးကြည့်မလားလို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်းမင်း says: ချစ်သူ ရေ …………………
ငါ မှားးးးး တာ ရှိ ရင်
နင် မှားးးးးးးး တာ ရှိ ရင်
ဆောင့် ကန် မယ် ;mrgreen:
ဟီး ဘေးက ကောင် ပြောတာကြားဖူးးးးးတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.